Apple Inoburitsa macOS 10.12.5 Beta yeVagadziri | Ndinobva mac
Tiri pamberi pe yechipiri beta vhezheni ye macOS 10.12.5 yevagadziri Uye ndeyekuti svondo rapfuura Apple haina kuburitsa vhezheni yavo uye yakaitira vashandisi vari kushandisa yeruzhinji beta shanduro, asi pane yekutanga vhezheni. Nhasi Muvhuro Apple inodzokera kumutoro uye inotangisa vhezheni 2 yevagadziri umo zvinoita sekunge tisina shanduko dzakawandisa kusara kweanowanzo gadziridzwa sisitimu yekuchengetedza nekugadzikana.
Apple inoenderera pamwe neshanduro dze beta uye nerubatsiro rwevanogadzira, izvi zvinokundikana kana mhinduro kumatambudziko anomuka anogona kuwanikwa, kuitira kuti ipapo tigova neyekupedzisira vhezheni yevamwe vashandisi. Mukutungamira uye sezvatinogara tichitaura nerudzi urwu rwebhetas, chinhu chakanakisa ndechekuti kana usiri mugadziri iwe unomirira yeruzhinji beta vhezheni kana usingaiise yakanangana pachikamu chako chikuru kuti usakwanise kukundikana kana kusapindirana nechero ipi zvishandiso zvako zvebasa. Chokwadi mumaawa mashoma yeruzhinji beta vhezheni ichaburitswa.
Ichokwadi kuti shanduko uye zvigadziriso mukushanda kwesystem kana chengetedzo zvinowanzo kuve zvakakosha zvakanyanya kupfuura shanduko maererano nemashandiro anogona kuwedzerwa kune mavhezheni ehurongwa hwekushanda, asi zvakajairika kuti vashandisi vanogara vachida dzimwe nhau maererano aya mabasa sezvo nhau mukuchengeteka dzisiri kuoneka. Mune ino kesi, semuma betas apfuura ehurongwa hwekushandisa hweMac shanduko yakawedzerwa neApple haina kutaurwa. Asi kana paine chero nyaya dzakakosha tichagovana nemi mose kubva mune imwecheteyo yekupinda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS Sierra » Apple inoburitsa macOS 10.12.5 beta yevagadziri
Mexico City inogona kuve neApple Chitoro chechipiri